Misoro yeNhau dzaNhasi, Chitatu, Kubvumbi 25, 2018
Kubvumbi 25, 2018
Chirongwa cheZimbabwe International Trade Fair chinopinda muzuva repiri muBulawayo varongi vacho vachiti makambani ariko gore rino akakwira nezvikamu makumi mana kubva muzana zvichienzaniswa negore rapera.
Sarudzo dzekutsvaga vachamirira Zanu PF musarudzo dzichaitwa munyika dzosiya mikono yakawanda yaruma pasi.
Masangano akazvimirira okurudzira mutungamiri wenyika, VaEmmerson Mnangagwa, kuti vaone kuti mitemo inobata sarudzo yavandudzwa. Izvi zvabuda pakuparurwa kwechirongwa cheFeya Feya Campaign kuMasvingo.
Vari kusiya basa sameya weHarare, VaBernard Manyenyeni, vanoti kanzuru yavo yakundikana zvikuru kugadzirisa nyaya yevanotengesa mumigwagwa vachiti kuwanikwa kwemabasa ndiko chete kuchapedza dambudziko iri
Zimbabwe inobatana nepasi rose mukucherechedza cherwere cheOtiizimu icho chanetsa pasi rose.
Muchirongwa cheLiveTalk na8pm, tiri kutarisa zviri kuitwa nevari kunze kwenyika mukupa ruzivo rwechirwere che Otiizmu.
Vanoda kuteerera Studio7, tibateyi na7pm pamasaisai anoti 909 am 4930; 6040, 15460 ne 15460 Kilohertz paShortwave mazuva ose.
Munokwanisawo kunzwa Studio7 na 6 am - Muvhuro kusvika Chishanu, pamasaisai anoti 909 am, 4930, 7270, ne 13630 Short Wave